Dugsiga Spectrum - ASO - BSO - TSO - Waxbarashada Waqti-dhiman - Labada - Antwerp - GO! DUGSIGA SPECTROOM
U turjun bogga Spectrumschool luqad kale
fasax wanaagsan oo mudan!
Dugsiga Spectrum wuxuu dhisayaa dhismo cusub oo ay la socdaan dugsiga hoose ee De Trampoline iyo Wilgenduin.
Ardayda ugu horreysa waxay u guuri doonaan dhismaha Janaayo 2024. Ka dib, dhismaha weyn ee hadda waa la cusboonaysiin doonaa.
Dugsiga Spectrum waxaad ku sugan tahay meesha saxda ah ee dhammaan koorsooyinka labada beddelka, dhammaystirka-dhamaadka ama waxbarashada ku jihaysan suuqa shaqada.
Waxaan maal gelineynaa mustaqbalkaaga!
Guji sawirka muuqaalka horumarka
Halkan ku dhufo dulmar
Wixii macluumaad dheeraad ah: info@spectrumschool.be
03/328.05.00 ee kambaska Ruggeveld (Deurne)
03/217.43.40 ee kambaska Plantin (Borgerhout)
KU SOO DHAWAADA! DUGSIGA SANADKA
Waxaan bixinaa in ka badan 50 koorsooyin waxbarashada farsamada gacanta iyo farsamada gudaha Warshadaha, STEM, Isboortiga, Daryeelka Caafimaadka, Martigelinta & Saadka.
Waxbarashada Sare ee Fasalka Koowaad
A-durdur & B-durdur
Waxbarashada dugsiga sare oo waqti-buuxa ah
Dhamaadka suuqa shaqada (BSO hore)
Barashada + Socda
Horumar & Dhammaad laba geesood ah (ASO / TSO hore)
Barashada + Shaqada
Waxbarashada heerka dhexe ah
Dhamaadka suuqa shaqada (DBSO hore)
Darajada koowaad + OKAN
Socodka A & B
Darajadeenii 1aad waxaad ogaanaysaa kartidaada. Sidan ayaad u sameysaa xulasho waxbarasho oo wanaagsan shahaadada 2aad.
Darajada 2aad & 3aad
Je kuu qaddarinaya xirfaddaada Adiguna isbarasho de suuqa shaqada. Hay'adani way ogtahay dhamaadka suuqa shaqada (BSO hore). Waxaan qabanqaabineynaa koorsooyin tababar ah oo labada barasho iyo waxbarasho heer-kulmeed oo waqti-buuxa ah.
Waxaad dhigaysaa aasaas adag oo la adeegsaday iyo kuu diyaarinaya waxbarasho sare. Hay'adani way ogtahay socodka iyo finalka labalaab ah (ASO & TSO hore).
(laga bilaabo 15 sano)
Waxaad isku daraysaa barashada iyo shaqada adiguna aad ayaad ugu xoogan tahay suuqa shaqada. Hay'adani way ogtahay dhamaadka suuqa shaqada (DBSO hore).
Raadi waxbarashadaada halkan!
QAAB-DHISMEENA OO KU SAABSAN Faahfaahin
WAA MAXAY GO DUGSIYADA SPECTRUM?
BARASHADA + waa barasho iyo in kabadan barashada:
Qiimeeyaan iyadoon wax dhibco ah lahayn
Koorsooyinkayaga oo leh dhamaadka suuqa shaqada (BSO hore) ma heleysid wax dhibco ah, laakiin waxaad heleysaa “kubbado cagaaran”, oo ku xiran ujeeddooyinka waxbarasho ee maado kasta. Waxaad ku guuleysaneysaa jawi cagaaran markaad hanato ujeeddada la doonayo in lagu gaaro. Diirada halkan ayaa ah sidii loo gaari lahaa himilooyinka waxbarasho ee arday kasta oo aan ahayn celceliska fasalka.
Darajada koowaad ee koowaad
Shahaadadayada koowaad waxaad ku ogaan doontaa kartidaada oo waxaad samayn doontaa xulasho waxbarasho oo wanaagsan. Daaran Plantin campus waad dhadhamin kartaa beero kala duwan oo waxaad ku ogaan kartaa kartidaada. Xarunta Ruggeveld, waxaad ka dooraneysaa degmo (STEM ama SPORT) waxaadna ku ogaan kartaa awoodaada degelkan.
> Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Barashada + Shaacinta
Waxaad isku daraysaa waxa ugu fiican 2-da adduun: barashada dugsiga iyo barashada goobta shaqada. Waxaad ku kasbataa khibrad badan jawiga shaqada ee dhabta ah. Sidan ayaad kula socotaa qalabka ugu dambeeyay iyo teknoolojiyada waxaadna kordhineysaa fursadaha suuqa shaqada. Iyadoo tababbarkeenna Waxbarashada labadaba, waaxdeena Barashada + Working (waxbarashada waqtiga-dhiman ah), layliyo iyo barashada goobta shaqada, “wax ku barashada dabaqa shaqada” waa bar-tilmaameed buuxda.
Talo-siinta suuqa shaqada
Matalayaasha iyo shaqaalaheenu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado ah oo lagu hagayo ardaydeena goobta shaqada. Goob kasta oo waxbarasho ah waxaan leenahay shabakad balaaran oo shirkado ah. Sidan ayaan kuugu hagaajineynaa goobtaada saxda ah ee suuqa shaqada.
Dhaqanka waa qeyb ka mid ah barnaamijyadeenna oo idil. Waxaan leenahay mashaariic dhaqameedyo waaweyn iyo kuwo yaryar. Miyaad dooneysaa inaad sii wadato wax abuuris ah marka laga reebo waxbarashadaada? Ka dibna waad nala soo xiriiri kartaa!
Inta lagu jiro galabtii waxaad ka qaybqaadan kartaa hawlo badan. Xul ka ah dalabkan: ciyaaraha, rugta durbaanada, yoga, kubada cagta, kubbadda koleyga, naadiga chess, naadiga koodhka, ...
Daryeelka aasaasiga ah ee ballaaran
Qof kastaa waa inuu awood u leeyahay inuu dareemo inuu joogo dugsigeena. Kooxdayada ballaadhan ee isku-duwayaasha daryeelka, lataliyayaasha ardayda iyo tababarayaasha dabagalka ayaa had iyo jeer diyaar u ah su'aalaha ku saabsan ladnaanta dugsiga, xirfadda waxbarasho, xaaladda guriga, xoogsheegashada, dhibaatooyinka bulshada, iwm.
KALA SOO BAX DAREENKEENA KOWAAD!
Isdiiwaangalinta sanad dugsiyeedka 2022 - 2023
WAAXDA QAYBTA CAAFIMAADKA EE MAKIINADDA KONTOROOLKA LOO XARUUNAY
ARDAYDA CARRUURTA KASOO SHAQEEYA SHAQAALAHA GUUD EE SHAQADA VIRTUAL LAB
Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barashada laba-geesoodka ah
“Socda! Dugsiga barbaarinta waxaan helay hagitaan shaqsiyeed. Daciifnimadayda si adag ayaa loo shaqeeyey si aan u guuleysto oo aan qalinjabiyo. Sababtoo ah aasaaskii adkaa ee la i siiyay, waligey wax dhibaato ah kuma gelin jaamacadda cilmiga sayniska. Aniga oo ah macallin PE ah, waxaan sidoo kale arintan ku dabaqaa ardaydayda maanta. ”
“Kadib waxbarashadeyda GO! Iskuulada Spectrumschool waxaan helay bachelor xirfadle ah oo otomaatig ah. In cabbaar ah waxaan u shaqeeyey injineer aaladaha aaladaha casriga ah. Hadda waxaan u shaqeeyaa sidii injineer mashruuc kontaroolo ah. Waxaan badanaa barnaamij ka dhigaa PLCs oo aan hirgeliyaa rakibidda. Xirfadaha aan ku leeyahay GO! Weli waxaa laygu baray Spectrum School shaqadayda maalin kasta. ”
Casharrada ka sokow, waxaan kaloo dul mari doonnaa Faransiiska, tusaale ahaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira howlo kale oo badan. Sidaas ayaan ku helayaa khibrad badan. ”
“Waxaan ku shaqeynaa mashruuc ku saleysan bilow ilaa dhamaad; gacmaheena iyo tikniyoolajiyad kumbuyuutar lagu xakameeyo. Waxay i siineysaa qanacsanaan weyn inaad adigu wax isku soo ururiso ka dibna aad dhab ahaan u aragto inay shaqeynayaan. ”
Isku qor 1A iyo 1B
HAWLAHA MAALMAHA IYO WAXYAALAHA
Diiwaangelinta sanad dugsiyeedka 2022 - 2023
Grand Prix Spectrum Grand Prix - Powertool Wareegga: daabacaadda labaad!
FURAN MAALINTA CAMPUS RUGVELD 2022
Diiwaangelinta sanad dugsiyeedka 2020 - 2021
VOKA HANDS GO! SHAQADA DUGSIYADA SPECTRUM EE YURUB EE VATE LABEL
WAA IN UGU DAMBEEYSA MADAXWEYNAHA MACALLINKA KA DAMBEEYA MARKA LOCKDOWN
Ciyaaraha Spectrum waxay martigeliyaan wareega hore ee 3x3 MASTERS
XADGUDUB & CIYAAR: ardaydu waxay horumariyaan ciyaartooda arcade!
GOBOLKA: GO! Spectrumschool waxay horumarinaysaa barnaamijka Dual Learning
VOTE on kambuyuutar
imtixaanka gaaban ee pixel
Baro + Baro ku meel gaar
Isku qor Barashada + Hormarka
Muuqaalka guud ee dhammaan koorsooyinka ku yaal Spectrumschool
Barashada habka qiimeynta maalin aan la xisaabin
Barashada + Xirfadaha ku meel gaarka ah
Barashada + Shaqeynta-ku-meel-gaarka ah
Diiwaangelinta liiska boosta ardayda hore
Baro + Dabagal
Is-qoritaanka barashada + Diiwaangelinta
tarjumadood ee caalamiga ah
Is-qoritaanka Waxbarashada + Shaqada
Barashada + Xirfadaha
Isqoristo Waxbarashada + Xirfadaha
Rakibaadaha qaboojinta Dual - Farsamada qaboojinta
HORECA - (Kaaliyaha) cunto karinta & jikada laba qof
Qoob-ka-shaqeeye - timo-jaraha
Kaaliyaha Daryeelka Suuqyada ee Hay'adaha Daryeelka Caafimaadka
GURIGA IYO DARYEELKA WAAYEELKA
Farsamoyaqaanka PC - maamulka shabakada - rakibida shabakada
Kaaliyaha Maamulka - Xoghaynta
Dayactirka Mechanic Auto Dual
SPORT OPTION SPORT (A)
1e Degree Warshadaha
Dhaqdhaqaaqa & Ciyaaraha
Timo-jaraha - timo-jaraha
Laba makaanikada makaanikada ah
SIYAASADAHA XUQUUQDA AASAASKA
Farsamooyinka farsamada korantada
XULASHADA BULSHADA & SOO DHAWEYNTA
LUUQADAHA XULASHADA Aasaaska ah
Ciyaaraha XULASHADA AASAASIGA AH (B)
Injineerinka korantada & Teknolojiyada rakibidda korantada
Mashiinnada asaasiga ah (qalabka mashiinka)
qalabka mashiinka Computer-ka taliso
Qalabka wax soo saarka Birta - CNC
CAR - KORONTADA
Laba-cunto degdeg ah oo shaqaale ah (bar cunto fudud) - bar cunto fudud
Injineerka korantada ee Warshadaha
Qalabka korontada Dual
Bulshada iyo Daryeelka
Duubista - Dhismaha - Shaqaalaha Dhismaha
FARSAMADA FARSAMADA FARSAMADA FARSAMADA
Daryeelka iyo daryeelka
Waxaad si fiican u shaqeyneysaa
Dugsigeena, Spectrum School, wuxuu bixiyaa in kabadan 50 koorsooyin xirfadeed iyo farsamo oo ka dhex jira Warshadaha, STEM, Isboortiga, Daryeelka Caafimaadka, Marti gelinta & Saadka.
Arbaco: 8u00 - 16u30
Sare u kac